Abaabul geedo tufaax ah xilliga dayrta | January 2020
Ugu Weyn Ee Abaabul geedo tufaax ah xilliga dayrta
Talooyinka ugu sarreeya ee loogu talagalay beeritaanka Apple geedo ee xilliga dayrta
Geedka geed kasta maaha mid fudud sida ay u muuqato marka hore. Dhirta miraha waxaa lagu beeray dhulka xilliga deyrta iyo guga. Waxaa la aaminsan yahay in habka ugu wanaagsan ee cimiladeena ay tahay geedo geedo midho ah xilliga deyrta. Sida iska cad, haddii geedka la beeray xilliga dayrta ay awoodaan inay ku noolaadaan qaboobaha qaboobaha, waxay u badan tahay inay kuugu farxaan goosashada iyo mudada dheer ee mustaqbalka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Abaabul geedo tufaax ah xilliga dayrta 2020